नेपाल एयरलाइन्सका थप २ कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
शुक्रबार, माघ ९, २०७७ Friday 22nd January 2021
प्रकाशित मिति : 2020-07-07
निगमले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्य मापदण्डमा रहेर उडान सञ्चालन गरिरहेको थियो । निर्धारित उडान सकेर क्वारेन्टिनबाट घर पठाउने क्रममा पिसिआर परीक्षण गर्दा पाइलटसहित चालक दलका सदस्यलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । निगम व्यवस्थापनले थप सतर्कता अपनाई पूर्वनिर्धारित उद्धार उडान यथावत् सञ्चालन हुने पनि जनाएको छ ।-रासस
कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा एकै दिन करिब १४ हजार ५ सयको मृत्यु
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपिओमा पर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै आवेदन, तपाईलाई कति पर्ला ?
कस्तो रहनेछ आजको मौसम ? हिमपातको सम्भावना !